NextMapping | Generation Covid Iyo Mustaqbalka
Generation Covid iyo mustaqbalka ……
Waxaa jira jiil cusub oo magaalada ah - Generation Covid oo sidoo kale loo yaqaan Gen C. oo ay ku jiraan dhalinyaro ka yar labaatan sano.
Waxaa laga yaabaa inaad aqoon u leedahay jiilal kale:
Gen Z 1997 ilaa 2020 (ogow inuu yahay jiilka warbaahinta bulshada)
Millenials 1981 ilaa 1996 (oo loo yaqaan jiilka farsamada)
Gen X 1965 ilaa 1980 (oo loo yaqaanay waagii hore jiilka da'da farsamada)
Zoomers (Ilmaha yar yar ee diida da ') 1946 ilaa 1964 (oo loo yaqaan inuu yahay jiilka dambe ee dagaalka / xorriyadda)
Dhaqan-yaqaanadii 1925 ilaa 1945 (oo loo yaqaanay jiilkii dagaalka)
Waxaa jira cilmi taasi waxay hada ka bilaabaneysaa saameynta aafada uu ku leeyahay dhalinyarada ka yar labaatan sano ee loo yaqaan Gen C sanadkii iyo badhkii la soo dhaafay.
Su’aal kama taagna in saameynta bulshada ee aafadu ku dhacday qof kasta weli si buuxda loo yaqaan. Si kastaba ha noqotee waa xiiso gaar ah in la daawado lana arko sida khibrada Gen C ee cudurka faafa ay u beddeli doonto xulashooyinkooda iyo dhaqankooda mustaqbalka.
Generation C ayaa ah KELIYA jiilka dhalinta yar ee ku dhex nool kuna dhex noolaan doona cudur saf ah sanooyinkooda qaab dhismeedka iyo dhalinyarada. Ka sokow cudurka faafa ee Gen C wuxuu goobjoog ka ahaa iyada oo loo marayo warbaahinta bulshada iyadoo la kordhinayo xiisadaha midab-kala-sooca, caddaalad-darrida hoggaanka dowladda, saameynta aafada ee kuleylka adduunka iyo xoojinta diiradda ragga iyo dumarka.
Baahnayn in la sheego isbadalka bulshada ee Gen C keeni doono wuxuu noqon doonaa mid xagjir ah oo carqaladeeya xaalada hada taagan. Waxaa jiri doona isbadalo badan oo ay abuureen Generation Covid iyo mustaqbalka.
Ugu dambayntii waxaan hayaa tiro macaamiil ah oo la wadaagay qaar ka mid ah halganka ay u arkayaan in carruurtooda yaryar ay haystaan ​​siddeed iyo tobankii bilood ee la soo dhaafay.
Waxaan maqley sheekooyin ku saabsan caruurta da'da dugsiga hoose ee leh heerar sare oo walwal ah taas oo ay ugu wacan tahay in wax lagu barto kaliya khadka tooska ah ama la macaamil furitaanka iyo xirnaanshaha joogtada ah ee dugsiyadooda.
Carruurta da'da dugsiga hoose waxay xiran yihiin waji (haddii ay wali aadayaan iskuulka) kuwa kalena dugsiga ma aysan aadin sanad ka badan ama bilo kooban.
Dugsiyada dhexe iyo dhalinyarada dugsiga sare waxay ku sameynayeen waxbarashadooda intabadan khadka tooska ah ama iskudhaf waqti dhiman fasalka iyo waqti dhiman khadka tooska ah.
Saamaynta nafsaaniga ah ee dadka iyo gaar ahaan dadka dhallin-yarada ah ee ku go'doonsan bulshada waxay saameyn ku yeelan doontaa isbeddel tobanaan sano ee soo socda ee aan la saadaalin karin.
Gen C waxaa loo aqoonsan doonaa inuu yahay jiilka faafa ee si aan macquul aheyn u bedeli doona mustaqbalka.
Waxaan wali aruurineynaa xog iyo cilmi baaris ku saabsan saameynta bulshada ee aafada waxaana helidoonaa waxbadan inta aan horumarka sameyno.
Si loo bilaabo in la fiiriyo saameynta jiil ee mustaqbalka waxaan u baahanahay inaan fahano dhaqdhaqaaqa dhaqameed ee ay kujiraan dareenkooda, qiyamkooda, saameynta deegaanka iyo aragtiyahooda ay qaabeeyeen dhacdooyinkoodii.
Marka laga hadlayo dareenka Jiilka Covid, waxaan soo gaarsiinnay tiro waalidiin ah oo soo sheegaya in carruurtooda ay la tacaalayaan dareennada murugsan inta cudurku socdo oo ay ka mid yihiin:
Waalidiinta waxay soo sheegaan inay ka walwalsan yihiin dhibaatooyinka kala duwan ee caruurtooda soo gaadhay iyo saamaynta aafadu ugu leedahay caafimaadka guud ee caruurtooda.
Si kastaba ha noqotee waalidiinta ayaa sidoo kale ka warbixiyay saameynta wanaagsan ee deegaanka ee aafada iyo saameynta ay ku leedahay caruurtooda sida:
Waqtiga qoyska oo kordhay waalidiinta oo aan safrin ama safrin darteed
Kordhinta qadarinta carruurta ee waqtiga ku qaadashada bannaanka iyo dabiiciga
Kordhinta xiisaha ay caruurtu u leeyihiin inay ikhtiraacaan kuna xirmaan teknolojiyadda
Naxariis iyo wacyigelin korodhay oo ku saabsan dadka kale
Kordhinta diiradda lasaarayo qiyamka dhaqameed sida fadhiisinta cuntada
Wadahadalka iyo wada xiriirka oo kordhay wadajirka awgiis
Qiyamku wuxuu qaabeeyaa jiilalka oo dhan - haddii aad u fiirsato liistada kore ee jiil kasta wuxuu lahaa saameyn dhaqameed oo muhiim ah oo qaabeeyay aragtidooda adduunka.
Marka la eego kala duwanaanshaha dareenka adag ee Gen C soo maray IYO la siiyay saamaynta wanaagsan ee deegaanka waxay badbaado u noqon kartaa in laga badiyo saadaasha soo socota ee Jiilka Covid iyo mustaqbalka:
Gen C wuxuu u arki doonaa cadaalad darada isirka mid qadiim ah oo aan la aqbali karin wuxuuna dalban doonaa magdhaw iyo xalka mustaqbalka.
Gen C wuxuu u arki doonaa sinaan la'aanta jinsiga iyo sinaan la'aanta inay tahay mid casriyeysan oo aan la adkeysan karin waxayna raadineysaa inay keento isku dheelitirnaan iyo sinnaan mustaqbalka.
Gen C wuxuu shaqada u arki doonaa qaab cusub maadaama waalidkood ay la joogeen guryahooda intii lagu jiray aafada waxaana laga sugayaa inay awoodaan shaqeeyaan meel kasta iyo wakhti kasta oo aan caqabad lahayn.
Gen C wuxuu noqon doonaa jiilkii waalidiin badan ay dib ugusoo guureen kuna noolaayeen nolosha miyiga taasina waxay keeneysaa in Gen C uu xiriir qoto dheer la yeesho dhulka sidaa darteedna deegaanka.
Gen C wuxuu yeelan doonaa naxariis qoto dheer guud ahaan aadanaha oo dhan taasna waxay abuuri doontaa wado si looga dhigo adduunka meel wanaagsan iyada oo loo marayo warbaahinta bulshada.
Gen C wuxuu si qoto dheer u fahmi doonaa muhiimadda ladnaanta maskaxda iyo caafimaadka tanina waxay u horseedi doontaa diiradda saarista xalalka la kordhiyo ee dhalinyarada iyo dadka waaweyn si loo hagaajiyo caafimaadka guud.
Gen C wuxuu riixi doonaa dakhli aasaasi ah oo caalami ah si looga hortago saameynta isbeddelka tikniyoolajiyadeed iyada oo loo marayo robotikada, xannibaadda iyo AI.
Ma aqaano adiga laakiin waxaan ku faraxsanahay saameynta ay Gen C ku yeelan doonto mustaqbalka.
Waxa aan si hubaal ah u aqaan ayaa ah in labadeyda caruur ah ee waaweyn oo jira shan iyo 16 bilood waligood ay saameyn ku yeelan doonaan faafida iyo in caruurtu ay yihiin kuwo aad u adkeysi badan.
Waxaan rajo weyn ka qabaa in carqaladeynta Gen C ay ku nool yihiin ay qalabayn doonto iyaga si ay dhammaanteen nooga caawiyaan inaan abuurno mustaqbal wanaagsan.